Thatha iDanube umlambo cruise ukuba uyayonwabela imbali, ukudla obumangalisayo, yaye amava angasoze. Ahambe isixeko mihla Amsterdam Western Europe kwi iDanube ukuba kancinci esehlela eMpuma Yurophu abadlulayo yezinto imbali, ezifana Salzburg (emzini umculo), okanye batsibe waya kutyelela imivalo bangachithi ezithandwayo Budapest. Le yingqokelela Cruises lomlambo yaseYurophu uya amavela zibe isithuba dreamlike ezaliswe kunye namava amatsha, izinto, izandi, Ivumba, and gastronomic encounters.
Rhone River na umlambo imbali ye Swizalend yaye Fransi kwaye enye misele kakhulu elibalulekileyo Europe. Akumangalisi ke phezu kuluhlu lwethu lwe The 5 Uninzi imilambo Beautiful eYurophu ukuhlola.
Uninzi imizi kufuneka isici sibonisa ukuba, uchaza khona kwabo, kwaye enza njengoko ubume kolona imizi intliziyo. I-Seine River eParis koko umlambo iThames ukuba eLondon, iDanube ku Budapest. Kuyinto yalapho, indawo abakhenkethi bafudukela kuyo, apho agcina iindawo ezinika umdla zotyelelo famous and capture memories.
Sicinga ukuba ngokoqobo khetha nje malunga nawuphi na omnye Cruises Seine kuqhutywa kwaye akuyi kudana! Uya kukwazi ukubona okuhle ka Paris, emzini uthando. ukhetho yakho esukela ububanzi. Ukuba kuphela ixesha, Cruises ziyafumaneka ukuze yanele ixesha lakho elifutshane apho. Kuba vibe ngakumbi wabeka-umva, sinandipha yokulwa Seine isidlo, kondela phezu Eiffel Tower kunye Louvre Museum, njengokuba uhamba nge. Okanye ukudibanisa ezi ezinika kunye babheke ukuba combo kuphela, ekhwela kumgangatho wesibini, Ukuncoma imibono, ke ngoku ukuthatha uhambo iphenyane, unandipha isidlo kunye iglasi yewayini. Unga nokuba uthabathe inxaxheba Moulin Rouge bonisa ukuba izibiliboco ukuze? Ukubona Paris real, ngenxa yokulwa Seine kukho unxibelelwano.
Imilambo ezincinane, misele, kunye nolwandle lwangaphakathi lwaseNetherlands lwenza iiNdawo zaManzi zaseDatshi, kwaye ingami apha yindlela owenza ukuba baphonononge eYurophu kunye namazwe zakhe eziwela phantsi. Iihambo bayijikeleza imizi yonke Amsterdam kunye Rotterdam badla ivele kwi yohambo, kodwa evelele a Dutch misele umfula cruise i imingcelele 19 iphendukile lithembekile exhonywe emiseleni kummandla ka Kinderdijk. Lungiselela iikhamera zakho.
Enye ziyamangalisa zokubonisa zeentyantyambo e Keukenhof, egadini enkulu intyatyambo. iikhaphethi zinenani imibala badalwe yi amahle kwezigidi ezisixhenxe, daffodils, kunye nezinye iintyatyambo- ngokona kulungileyo ngo-Epreli noMeyi. Khangela Cruises elifutshane ngeli xesha lonyaka egxininisa ngokukodwa emasimini kwebhalbhu Dutch.
bonke ababe-! Incwadi eqeqesha itikiti kuhambo lwakho loMlambo Gcina A Isitimela namhlanje kwaye uhamba ngenqanawa!
Ufuna ukuba zilungise ngendlela yethu hetalia us “5 Most Beautiful Imilambo EYurophu Ukuze Hlola” kwi sayithi yakho? ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye okubhaliweyo kwaye sinike nje ngetyala ngekhonkco kule post blog. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-beautiful-rivers-europe%2F%3Flang%3Dxh- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
#IYurophu #imonaboat #umlambo #uhambo lomlambo
Qeqesha ukuhamba iOstriya, Uloliwe wokuhamba eBelgium, Qeqesha ukuhamba iBritane, Ukuhamba ngololiwe eTshayina, Qeqesha uhambo eFrance, Qeqesha uhambo eJamani, Qeqesha uKhenketho e-UK, Travel Europe